Inqanaba lePlagi yeWordPress yeWebhusayithi iyamangalisa! | Martech Zone
Inqanaba lePlagi yeWordPress yeWebhusayithi iyamangalisa!
NgoMgqibelo, ngoJuni 6, 2020 NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Phantse wonke umxhasi weWordPress kwaye malunga nayo yonke into esiyijongileyo sisebenzisa i-Yoast's WordPress SEO plugin ukulawula izinto eziphambili zokwenza ukukhangela kweinjini. Ngaphandle kweplagin yasimahla, iYoast ibonelela ngoluhlu lweeplagi ezizodwa ngokunjalo.
Ndihlala ndifumana ukuba iplagi ye-Yoast's SEO ilungile, kodwa zimbalwa iipevesi zezilwanyana endinazo:
I-Yoast ihlala inyanzela abantu ukuba baguqukele kwenye okanye ngaphezulu kweeplagi zabo ezihlawulelweyo. Hayi ... banikeze iplagi enkulu yasimahla esetyenziswa ngokubanzi, ke ndifuna ukubabona besenza imali ngalo mnikelo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kuyacotha kakhulu kuluvo lwam.
The Iplagi yeYoast ifuna isibonelelo esincinci kwaye iyacothisa indawo yam.
Siyazi-ngeselfowuni kwaye ukukhangela kubaluleke kakhulu-ukuba ungalahla amakhulu okanye amawaka abatyeleli ukuba amaxesha akho okulayisha iphepha acothayo kunomntu okhuphisana naye… isantya ngumba obaluleke kakhulu kum.
Iwizard yokuguqula ukusuka kwiPlagi ye-Yoast ye-SEO ukuya kwi-Rank Math ilula. Olunye uncedo lweplagin kukuba unokungenisa ngaphakathi kwaye ulawule indawo yakho eqondisa kwakhona. Ndinqwenela ukuba banike amaqela ukuba acwangcise ukuqondisa kwakhona, kodwa ukunciphisa inani leeplagi kufanelekile ilahleko yelo nqaku.
Ndiyayixabisa ngokukodwa i-Rank Math's analys content, efanelekileyo kakhulu kwii-novices ze-SEO ukuba zibhale kwaye ziphucule umxholo wamagama aphambili anokujolisa kuwo:
Ukucoceka kunye nokuLula koMsebenzisi Inqanaba leMathematics lenzelwe ukubonisa ulwazi oluchanekileyo ngexesha elifanelekileyo. I-interface elula, kodwa enamandla yomsebenzisi ibonisa iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nezithuba zakho kunye neposi ngokwayo. Sebenzisa olu lwazi, unokuyiphucula i-SEO yakho yeposi kwangoko. Inqanaba leMathematics ikwabonisa ukujongwa kwangaphambili kwe snippet. Unokujonga kwangaphambili ukuba iposti yakho izakuvela njani kwii-SERPs, jonga kwangaphambili ii-snippets ezityebileyo, kwaye ujonge kwangaphambili ukuba iposti yakho izakujongeka njani xa kwabelwana ngayo kwimidiya yoluntu.
Ndihlaziye uluhlu lwam lweengcebiso Iiplagi zeWordPress zeshishini ngenqanaba leMathematika njengelinye endaweni yeYoast kunye noLungiso kwakhona. Ndiqinisekile uza kubona izibonelelo.
tags: Uhlalutyo lomxholoamagamaisikhundla sezibaloiplagiSitemapsiplagi yamagamaxml iisemaphuyoast